सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीले सरकारलाई घुँडा टेकाउने ! - Everest Dainik - News from Nepal
सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीले सरकारलाई घुँडा टेकाउने !
काठमाडौं, चैत २७ । सिन्डिकेट तोड्न सरकारले रुट इजाजत खुला गरेपछि आक्रोसित यातायात व्यवसायीहरुले भेला गरेर आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । उनीहरुले आन्दोलनबाटै सरकारलाई घुँडा टेकाउने दाबी गरेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस सवारी साधन दर्ताबाट २६ करोड राजश्व
याे पनि पढ्नुस यातायात व्यवसायीबाट वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर छली